अञ्जुलाई छोरीले नै बिहेका लागि दबाब दिएकी छिन् तर, के अञ्जु बिहे गर्ने सोचमा छिन् त ? (भिडियो) – Halkhabar kura
२ पुष २०७७, बिहीबार १९:५१
अञ्जुलाई छोरीले नै बिहेका लागि दबाब दिएकी छिन् तर, के अञ्जु बिहे गर्ने सोचमा छिन् त ? (भिडियो)
‘धेरै माया नदेऊ मलाई, टाढा हुँदा गाह्रो हुन्छ ।’ गायिका अञ्जु पन्तले स्वर तथा संगीत भरेको गीत हो यो । तर, गीतको भावले उनी र उनकी छोरी परितोषिकाबीचको सम्बन्धको कथा भन्छ । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीका क्रममा अञ्जु र परितोषिकाले एक अर्काबीचको माया र जिन्दगीका कयौं भोगाइका कथा फुकाए ।
प्रश्नले अञ्जुलाई केहीबेर सोच्नमग्न बनायो । भनिन्–‘नानीले जहिले पनि मलाई किन निराश हुनुभएको भन्छिन् । मेरो डिभोर्स भएको १० बर्ष भयो । १० बर्षदेखि मलाई छोरीको साथ त छ । तर, उनी पनि पराई घर गएपछि मलाई दुख्दा तातो पानी तताएर दिने मान्छे चाहिन्छ । छोरीले बिहे गर्नैपर्छ भनेर प्रेसर दिइरहेकी छिन् । तर, मेरो सोच बिहे नै नगर्ने हो । यो मेरो इच्छा नै नभएको कुरा हो । तर, मलाई धेरैले बिहेका लागि सुझाव दिइरहनुभएको छ ।’
अञ्जु र परितोषिकाले जिन्दगीका गाली, ताली, ठक्कर खुबै भोगेका छन् । अहिले पनि अञ्जु कुनै एउटा नकारात्मक प्रतिक्रियामा लामो समय सोचेर बस्छिन् । अञ्जु भन्छिन् ‘कोही व्यक्तिले गाली गर्‍यो भने मलाई निकै निराश बनाउँछ । म किन यस्तो लेखेको होला भनेर लामो समयसम्म सोच्छु । मेरो छोरीले यी सबै कुराहरु भोगेकी छिन् । बरु, उनले मलाई सम्‍झाउँछिन् । एक–दुईवटा गालीका बीचमा हजारौं राम्रा प्रतिक्रिया आएका छन्, त्यो हेरेर खुशी हुनुहोस् भन्छिन् । तर, मलाई त प्रतिक्रिया दिने मान्छे र उसको सोचलाई हेरेरै तनाव हुन्छ ।’
Previous परम्परा तोडेर कोरोना सङ्क्रमितको शव काँधमा उठाउँदै महिला
Next बिरामी पर्न थाले उखु किसान: माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने अडान, ओली सरकारले देखायो निरीहपन